अपहरण, तस्करीलगायत दर्जनौं मुद्दाका आरोपित पटेल पक्राउ
प्रस, लङगडी, १३ कात्तिक/ विगत एक दशकदेखि अपहरण, तस्करीलगायत दजर्नौं मुद्दामा आरोपित अमिका पटेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पर्सा, लहावरथकरी गाविस–७ निवासी पटेल लामो समयदेखि फरार रहेका थिए। उनलाई प्रहरीले शनिवार राति २ बजे मुडली गाविसको तीनडोभिया टोलमा छापामारी गरी नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो। पटेल तीनडोभियाका एक तस्करको घरमा लुकी बसेको गोप्य सूचनाको आधारमा छापामारी गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय, पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक सन्तु जयसवालले बताएका छन्। अमिका पटेलको पहिचान ठूलै अपराधीको रूपमा भएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इप्रका पोखरिया, सुर्जाहा कटी बेस, सशस्त्र प्रहरी बेस पोखरिया, इप्रका लङगडीबाट खटेको संयुक्त टोलीले छापामारी गरेको थियो। सीमावर्ती गाउँ सबैठवा, खेस्राहा, पकाहा, मैनपुर, धोबिया टोल, भेडीहारी, भेलाहालगायत दर्जनौं गाउँमा एक दशकदेखि पटेलको आतङक व्याप्त थियो। केही वर्ष अगाडिसम्म प्रहरीसँग राम्रो साँठगाँठ गरी उनी निर्धक्कताका साथ गाँजा, चरेश, अफिम तस्करीका साथै सीमा क्षेत्रमा अवैध रक्सी भट्टी सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यसैगरी उद्योगपति मनोज दासको चर्चित
छठ पुजा समिति घडिअर्वाद्वारा आय व्यय प्रस्तुत सुरक्षाका लागि दुईसय प्रहरी र सिसि क्यामरा जडान
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ वीरगंजको प्रसिद्ध पर्यटकियस्थल घडिअर्वा पोखरीमा छठ पुजा व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित आय–व्यय आज सार्वजनिक गरिएको छ। छठ पुजा व्यवस्थापन समिति घडिअर्वाले आज पोखरी परिसरमै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवस्थित रूपमा पुजा सम्पन्न गर्न टेन्ट, विजुली बत्ति तथा फुल सजावटमा ६ लाख २१ हजार, भिडियोग्राफिमा १८ हजार, साउण्ड सर्भिसमा २५ हजार, सरसफाईमा १५ हजार, सुरक्षा खर्चमा ४० हजार, प्रचार प्रसारमा ३५ हजार, पुरस्कारमा ४ लाख, स्टेशनरिमा ५ हजार, अफिस सञ्चालनका लागि ५० हजार, चैत्य छठ पुजाका लागि २५ हजार गरी कुल १२ लाख १५ हजार खर्च लाग्ने जनाएको छ। यसै गरी समितिले पुजाका अवसरमा टिकट विक्रिबाट ९ लाख ६० हजार, दाताबाट २ लाख ४० हजार, दानपेटिकाबाट १२ हजार गरी १२ लाख १५ हजार आम्दानि हुने अनुमान पनि लिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पुजा व्यवस्थापनका लागि गठन गरीएका विभिन्न उपसमितिहरूलाई दिईएको जिम्मेवारी पुजाको दिन पुरा गर्नका लागि उपसमिती तयारी अवस्थामा रहेको समितिका उपाध्यक्ष हिरालालप्रसाद कानुले बताए । पुजा अवधिभर पोखरी परिसरमा रहेको चारवटै गेटमा सिसि क्यामेरा ज
घण्टाघरले अब सही समय देखाउने
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ वीरगंजको उल्लेख्य स्थानको सूचीमा पर्ने घण्टाघरको मरम्मत सम्भार भएको छ। वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत् करिब साढे तीन लाखको खर्चमा वीरगंजको पहिचान बनेको घण्टाघरको मरम्मत सम्भार रङगरोगन गराएको हो । अहिले घण्टाघर पुन: वीरगंज आउनेहरूका लागि एकपटक हेर्ने लायक बनेको छ। वीरगंजको दृश्यावलोकनका लागि घण्टाघर खुला अवस्थामा थियो। तर घण्टाघरको माथिल्लो भागमा दृश्यावलोकनका लागि जानेहरू सिढी चढ्दा चराचुरुङगीको मलमूत्र गन्हाएर दृश्यावलोकनका लागि जान छाडेका थिए । अहिले बाहिर र भित्र रङगरोगनका साथै आन्तरिक सफाइ पनि भएकोले पुन: दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त बनेको छ। घण्टाघरको मरम्मत सम्भार, रङगरोगन दातृसंस्थाले दिन लागेको नयाँ घडीको कारण भएको हो। जापानको युन्याको जेसीजले अत्याधुनिक घडी यही नोभेम्बरमा जडान गरिदिने वीरगंज जेसीजका अध्यक्ष विजयराज कर्णिकारले बताएका छन्। पुरानो घडी मरम्मतका लागि ठूलो धनराशि खर्च भएपनि घडी धेरै दिन नचल्ने भएकोले दातृसंस्थाले नयाँ घडी जडानका लागि प्रयास गरेको हो। दातृसंस्था युन्याको जेसीजले नयाँ घडीका अलावा लोडसेडिङगबाट घड
बास्केट बलको उपाधि दबङगलाई
प्रस, बारा, १३ कात्तिक/ कलैया बास्केट बल क्लबको आयोजनामा बारा सदरमुकाम कलैयामा सञ्चालित नगरस्तरीय बास्केट बल प्रतियोगिताको उपाधि दबङग ट्राभल्स कलैया बास्केट बल क्लबले हासिल गरेको छ। शनिवार सम्पन्न फाइनल खेलमा दबङग ट्राभल्सले तरुण दल बारा सिद्घेश्वर बास्केट क्लबलाई ८ अङकको विरुद्ध १२ अङकले पराजित गरी विजयी भएको हो । दबङग ट्राभल्सका लागि म्यान अफ दि म्याच घोषित उमेश पटेलले ६, अशेष मैनालीले ४ र शिव जैसवारले ३ अङकको योगदान दिएका थिए। तरुण दल बाराका लागि प्रतीक उपाध्याय र विवेक तिवारीले ४–४ अङकको योगदान दिए। प्रतियोगितामा १६ अङकको योगदान दिएबापत तरुण दल बाराका सञ्जय कुमार गुप्ता म्यान अफ दि सिरीज घोषित भए। प्रतियोगितामा विजेता तथा उपविजेतालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं बारा प्रहरी प्रमुख सुरेश विक्रम शाहले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । उक्त अवसरमा अच्युत मैनाली, मुक्तिप्रसाद यादव, श्यामबाबूप्रसाद गुप्ता, लुकेश सिंह, फुल महम्मद मंसुर, बैजु दास, माधवप्रसाद साहलगायतले बास्केट बललाई लोकप्रिय बनाउन जोड दिएका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन अजयकुमारले गरेका थिए।
तिहार–फूल र वीरगंज- –कुमार रुपाखेती
कुनैबेला बोटबिरुवाबाट भर्खरै टिपिएका ताजा फूलहरू पूजाकोठा र मन्दिरमा पुग्दथे भने अहिले टाढा–टाढाबाट भित्र्याइएका, ओइलिएका बासी फूलहरू पूजाकोठादेखि सबैखाले धार्मिक, सामाजिक उत्सवहरूमा शोभायमान बन्दछन्। यसपटक तिहारका बखत मुलुकका कतिपय जिल्लाहरू फूलमय बने भने कतिपय जिल्लाहरूमा फूलको हाहाकार, अनिकाल पर्‍यो। तर पनि भनिन्छ नेपालमा ६ हजारको हाराहारीमा विभिन्न जाति, प्रजातिका फूलहरू फुल्ने गर्दछन्। नेपालकै ख्यातिप्राप्त ‘सुनाखरी’ जातको फूलको झन्डै तीन सयभन्दा बढी प्रजाति नेपालमा पाइन्छ। हिउँदमा हिमाली–पहाडी भेगमा जताततै लटरम्म देखिने लालीगुँरासको सौन्दर्यता त झन् ‘क्या कहना’। भनिन्छ संसारमैं नभेटिने दुई सय प्रजातिका फूलहरू समेत नेपालको हिमाली–पहाडी क्षेत्रमा भेटिन्छन्। यिनै कारणहरूले गर्दा नेपालको कुना–काप्चा घुम्ने पर्यटकहरू नेपाललाई ‘फूलको देश’ पनि भन्दछन्। यहाँको मौसम, हावापानी र माटोसमेत फूलका लागि उपयुक्त र उत्तम मानिन्छ । तर कुन प्रजातिका कस्ता–कस्ता फूल, कुन मौसममा कहाँ–कहाँ फुल्छन् भन्ने रेकर्ड नेपाल सरकारसँग छैन। अनुकूल हावापानीमा लावारिस किसिमले, अवैज्ञानिक तरिकाले, प्राकृति
बालबालिकाहरूका लागि साथी होइन, रोल मोडेल बन्नुहोस्
अनन्तकुमार लाल दास बालबालिकाहरूलाई सही अभिभावकत्व प्रदान गर्नु अहिले ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको छ। आज हरेकले भन्न थालेका छन्–केटाकेटीहरूसँग अभिभावकको व्यवहार साथीजस्तै हुनुपर्छ अनिमात्र उनीहरूको विकास सम्भव छ । तर यस सन्दर्भमा मेरो धारणा केही फरक छ किनभने साथीहरूसित मनको भावना त शेयर गर्न सकिन्छ तर उनीहरूसँग कुनै शिक्षा लिन सकिन्न। यस कारण मेरो विचारले अभिभावकहरू मित्र बन्नुभन्दा उनीहरूका लागि रोल मोडेल बन्नु उचित हुन्छ किनभने बालबालिकाले आआफ्ना अभिभावकलाई आफ्नो आदर्श मानेर उनीहरूको अनुसरण गरिरहेका हुन्छन्। आधुनिक कालमा सही तरिकाले बालबालिकाको रेखदेख गर्न मुश्किल भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन प्रदान गर्नु झन् जटिल बन्दै गएको छ। सही अभिभावकत्व प्रदान गर्नु आज निकै चुनौतीपूर्ण छ। बदलिंदो सामाजिक परिवेशमा यदि बालबालिकामाथि समझदारीपूर्वक ध्यान दिइएन भने उनीहरूको मन र मस्तिष्कमाथि वातावरणको नराम्रो प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस कारण यदि तपाईं आदर्श अभिभावकको रूपमा आफ्नो सन्तानलाई अनुशासित, जिम्मेवार र सबैको आँखाको पुतली बनाउन चाहनुहुन्छ भने तल उल्लिखित सुझाव
परिवर्तन युगको आग्रह
मानिस, रहनसहन, वेशभूषा, चलन, फेसन, नीति–नियम आदि समयका साथ परिवर्तन हुन सकेनन् भने तिनको अस्तित्व नाश हुन्छ। प्रत्येक मानव समुदायले आफ्नो संस्कृतिलाई नयाँ ढङगले परिष्कार गर्दै समयका साथ माथि वर्णित विषयमा परिवर्तन गर्न सकेन भने अस्तित्वका लागि बाधा आइलाग्छ। एउटा उदाहरण नै लिऊँ हिन्दूहरूको दशैं, क्रिश्चियनहरूको क्रिसमस डे अथवा मुसलमानहरूको इदपर्वको। हिजो समाज सानो छँदा, सामुदायिकता मात्र महत्त्वपूर्ण छँदा यिनको जुन रूप र रङग थियो, आज पनि त्यसैको अनुकरण गरिरहने हो, पुरातनप्रति दुराग्रह राखिराख्ने हो भने यी पर्वहरू हराएर गइसकेका हुन्थे। किनकि हिजोको मानिससँग कार्यव्यस्तता थिएन। प्राय: सबैको पेशा कृषि थियो। कृषिकर्ममा मौसमअनुसार दुईपटक घोर परिश्रम गरेपछि मानिसलाई फुर्सत नै फुर्सत हुन्थ्यो। र उनीहरू चाडपर्वहरूको सर्वाधिक आस्वादन गर्न पाउँथे। आज पनि त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्ने हो भने जागिरदारहरूले जागिर नै गुमाउनुपर्नेछ। आज विदेश गएका लाखौं नागरिकमाथि यी पर्वहरूमा अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यता लगाइदिने हो भने मुश्किलले कोही जागिर खान विदेश जान पाउँथ्यो। पुरानो समयमा वसन्त पञ्चमीदे
तिहार सकियो, छठ र बकरिदको तयारी तीव्र
प्रस, वीरगंज १२ कात्तिक/ हिन्दूहरूको महान् पर्व बडादर्शैपछि तिहार पनि सकिएको छ भने तराईको महापर्व छठ सँघारमा छ। बडादशैं सरह तिहार पनि यस वर्ष अपेक्षाकृत शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो। गत वर्ष सरह यस वर्ष न पटाका पड्क्यो न जुवा–तास, कौडा नै भयो। पेशागतरूपमा हुने जुवा–कौडा बन्द भएपछि धेरै घर–परिवारको यस वर्ष ठूलो रकम जोगिन पुगेको छ। यसैगरी यमपञ्चककै दिनबाट हुने पटाका र विभिन्न खाले आतिशबाजी यसवर्ष मात्र दिपावली अर्थात् लक्ष्मीपूजाको दिन नगण्य रूपमा गरियो । बितेका वर्षहरूमा वीरगंजको दिपावली हेर्न शहर प्रवेश गर्नेहरूको अलखियामठबाटै पटाकालगायत आतिशबाजीबाट स्वागत गर्ने गरिन्थ्यो । यसवर्ष मेनरोडमा पड्काउने कसैले हिम्मत गरेन। तर पटाकालगायत आतिशबाजी गर्नेहरुलाई विस्फोटक पदार्थ ऐनअनुसार सजाय हुने प्रचार गरेको वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताको आकाशमा सबैभन्दा बढी पटाका पड्कँदा पनि त्यहाँ प्रहरी मुकदर्शक भएकोमा स्थानीय बासिन्दा चकित परेका थिए। हिजो दिदी–बहिनीहरूले दाजुभाईको दीर्घायुको कामना गर्दै भाइटीका गरेपछि यस वर्षको तिहार विधिवत् समाप्त भएको छ भने बजारमा छठपूजाको तयारी धुमधामले सुरु भ
शंख्वध्वज शाख्वाको सालिक अनावरण
प्रस, वीरगंज १२ कात्तिक/ नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वीरगंजमा निर्मित राष्ट्रिय विभूति शंख्वध्वज शाख्वाको सालिक अनावरण गरेका छन्। वीरगंज उपमहानगरपालिकाद्वारा वीरगंज–५ बिर्ता मेनरोडमा निर्मित सो सालिकको नेपाल संवत् ११३२ को उपलक्ष्यमा अनावरण पश्चात् ािलिक निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउने वीरगंज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शिवदत्त भट्टराई समेतका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेवा: खल: वीरगंजको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रमको अध्यक्षता नेवा: खल: वीरगंजका अध्यक्ष अशोकमान श्रेष्ठले गरेका थिए। त्यसअघि नेपाल संवत् ११३२ को उपलक्ष्यमा वीरगंजमा नेवार समुदायको बढी सहभागितामा मोटरसाइकल र्‍यालीे आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै सोही दिन नेवा: खल: वीरगंजले स्व. गणेशमान सिंह, शहीद तेजबहादुर अमात्य र स्व. दुर्गादेवी श्रेष्ठको सालिकमा माल्यार्पण गरी दीप प्रज्वलन गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
वीरगंज डे–नाइटको उपाधि होली एन्जल स्कूललाई
प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ प्रगतिशील युवा क्लब लक्षुमणवाद्वारा सञ्चालित वीरगंज कप डे–नाइट क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि होली एञ्जल स्कूलले हात पारेको छ। नारायणी रङगशालाको क्रिकेट मैदानमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा होली एन्जल स्कूलले पहिलो ब्याटिङग गरी ५ विकेटको नुकसानिमा १२७ रन जोडेको थियो। प्रतिउत्तरमा १२८रनको विजय लक्ष्य लिएर मैदानमा उतरिएको युनाइटेड क्रिकेट क्लब २० ओभरको खेलमा केवल ११८ रनमा सीमित भएपछि होली एन्जलले ९रनले विजय प्राप्त गरेको छ । आजको खेलमा म्यान अफ दी म्याच लौबिन गुरुङग घोषित भएको थिए। उनले ९ चौका र १ छक्काको मददले ६६ रन जोडेका थिए। यसैगरी आज आयोजित समापन समारोहमा गुरुङगलाई नै म्यान अफ दी सीरीजको पनि उपाधि प्राप्त भएको छ । उत्कृष्ट बैट्समनमा अनिल बरहि, बेस्ट बौलरमा मनोज साह र बेस्ट कीपरमा दीलीप राज थापालाई सम्मानित गरिएको थियो। समापन समारोहका प्रमुख अतिथी तमलोपाका नेता पुरुषोत्तम लाल झा, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेल, डा. प्रमोद सर्राफ र राजेश मान सिंहलगायथले विजयी, उपविजेथन र सर्वोत्कृष्ट खेलाडिहरूलाई नगद, सिल्ड र प्रमाण पत्रले सम्मानित गरेका थिए। समा
सम्झौताको विरोध दूर्भाग्यपूर्ण
–श्रीमन्नारायण नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई धेरै अर्थमा सफल र उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ। खासगरी भारतसँग भएको औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा संवद्र्धन सम्झौता (बिपा) लाई एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ। बिपाको नेपालभित्र भइरहेको विरोध र यसलाई राष्ट्रियता सँग गाँसेर हेर्ने नेपाली राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूको मनोदशालाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ। नेपालमा बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी र महँगीलाई दृष्टिगत गर्दा यहाँ वैदेशिक लगानीको आवश्यकता विगत लामो समयदेखि महसुस गरिएको हो। वर्तमान आर्थिक युगमा कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन। माओत्सेतुङको देश चीनलाई पनि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। चीन अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने देशको रूपमा चर्चित छ। विगत तीस वर्षसम्म भारतको पश्चिम बङगाल राज्यमा शासन गरेको त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले केन्द्रमा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्ने र आफ्नो शासन भएको राज्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको थियो। सिंगुर र नन्दीग्रामको घटना र दोहोरो नीतिका कारण पश्चिम बङगालबाट कम्यु
आध्यात्मिक उन्नतिको बाटोमा
महाकवि गेटेले एउटा प्रसङगमा भनेका छन्– What you can do, or think you can,– Bigin it ! Boldness hath genius, power and magic in it. Only engage-and then the mind grows heated: Begin!-and soon your task will be completed. तिमी जे गर्न सक्दछौ, अथवा सोच्दछौ कि तिमी गर्न सक्दछौं–सुरु गरिहाल। अध्यवसायमा एउटा यस्तो बल हुन्छ कि समस्त प्रतिभा र योग्यता जादू जस्तै काम गर्न थाल्छन्। काममा आफूलाई होमिदेऊ। यसरी होमेपछि नै तिम्रो बुद्धिमा एक प्रकारको उष्णता–एक प्रकारको गर्मी भरिन्छ। त्यसैले सुरु गरिहाल, र छिटै के देख्नेछौ भने तिम्रो लक्षित कार्य पूरा हुन बेर लाग्ने छैन, कुरैकुरामा सम्पन्न हुनेछ । प्राय: अधिकांश कार्यमा हामी असफल यस कारण हुन्छौं किनभने त्यो सुरु नै गर्दैनौं। यदि हामीले कुनै पनि कार्य पूरा गर्नुछ भने त्यसलाई सुरु त गर्नैपर्छ। आरम्भ गर्ने प्रयत्नलाई तिरस्कार गरेर हामी कसरी केही गर्न सक्छौं ? मानौं एउटा घर बनाउनु छ– त्यसबारे राय–सल्लाह लिन्छौं, नक्शा बनाउन लगाउँछौं, तर यी सबै सपना हो, जबसम्म घरको जग खनिंदैन, काम सुरु हुँदैन। तर जसै जग खन्न थालिन्छ तपाई प्रसन्न बन्नुहु
पूर्वाग्रही भएर अरूको बहकाउमा नलाग्न प्रहरी तथा प्रशासनलाई चेतावनी
प्रस, वीरगंज, ७ कात्तिक/ वीरगंज, घण्टाघरमा आयोजित चियापान समारोहमा ए. नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र संविधानप्रति माओवादीलाई बढी माया रहेको बताएका छन्। उनले संविधानसभाका लागि माओवादीले जनयुद्ध गरेको र मधेसी, पहाडी, पूर्वेली, हिमाली, पश्चिमेली आम किसान, मजदुर र झुपडीमा बसेका नेपालीहरूको बलिदानबाट आएको हुँदा संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियाप्रति माओवादी जति चिन्तित अरू हुन सक्दैनन् भनी बताए। जसले जन्माउँछ ऊभन्दा अरूलाई बढी माया हुन्छ भन्नु मूर्खता हुने उनले बताए। उनले शान्ति र संविधान अन्तिम चरणमा रहेको चर्चा गर्दै एक महिनामा त्यसको टुङगो लगाउनेगरी खाका तयार गर्ने काम भइरहेको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्यामा संलग्न रहेको भनी प्रहरी प्रशासनले पूर्वाग्रही र कसैको बहकाउमा आएर माओवादीलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र गर्न लागेको बताउँदै त्यस्तो नगर्न चेताएका थिए। माओवादी संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएका हत्याको कुनै खोजबिन नै नगरी माओवादीलाई मात्र बदनाम गर्ने कार्य भइरहे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी चुप नबस्ने उनले बताए । ए. न
जिम्मेवार नेताहरू नै दलाली र भ्रष्टाचारमा लागेको सभासद् प्यासीको आरोप
उपेन्द्र यादव, बारा, ७ कार्तिक/ नेकपा एमाले, बाराका सभासद् रामचन्द्र प्यासीले जिल्लाका जिम्मेवार नेताहरू दलाली र भ्रष्टाचारीमा लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रेस चौतारी बाराले आज कलैयामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभासद् प्यासीले एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका व्यक्तिले बाराका कलकारखानामा दलाली गरी रकम कमाउने र त्यही रकमले जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारी किनमेल गरी गुट–उपगुट खडा गरेको आरोप लगाएका हुन्। सभासद् प्यासीले बाराका स्थानीय निकायहरूमा भइरहेको अनियमितताको कारण पार्टीभित्र पनि भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको बताएका छन्। “माओवादीले नै देशमा शान्ति र संविधान नचाहेकोले तीनपटक संविधानसभाको म्याद थप्दा पनि शान्ति बहाली र संविधान बन्न सकेन”– प्यासीले भने–“प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणको क्रममा गरेको विपा सम्झौता नेपाली व्यापारीभन्दा भारतीय व्यापारीहरूलाई फाइदा पुग्ने हुँदा यो सम्झौता राष्ट्रघाती हो।” पत्रकार सम्मेलनमा देखिएको कुराले एमाले बाराको विवाद साम्य हुनुभन्दा चर्किएको बुझिन्छ। प्रेस चौतारी बाराका अध्यक्ष सुवासप्रसा
च्युटाहामा टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु
प्रस, कलैया, ७ कात्तिक/ लि युवा क्रिकेट क्लब महेन्द्र आदर्श च्युटाहाको आयोजनामा सोमवारदेखि टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन एक कार्यक्रमबीच मधेसी जन अधिकार फोरम गणतान्त्रिक बाराका अध्यक्ष रामकिशोर यादवले गरे। प्रमुख अतिथि रहेका यादवले प्रतियोगिताका लागि पाँच हजार एक सय नगद आर्थिक सहयोग प्रदान गरे। प्रतियोगितामा आठवटा टिमको सहभागिता छ।
राष्ट्रिय वनको सार्वजनिक जग्गा गुम्बाले बिक्री गर्‍यो स्थानीयवासी, वन सम्ूहद्वारा जग्गा बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ७ कात्तिक/ माओवादी युद्धकालमा भरतगंजसिगौल नजिकैको राष्ट्रिय वन क्षेत्र १२ बिघाभन्दा बढी फडानी भएको थियो। यसरी फडानी गरिएको वन क्षेत्रको जमीन विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बालगायत सार्वजनिक संस्थाले भागबन्डा गर्दै हालपनि खेतीबाली लगाउँदै भोग गर्दै आइरहेका छन्। केही वर्ष भोग गर्दै सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्ने प्रथा कुनै नौलो नभएपनि करिब दुई साता अघि फेरि जग्गा बिक्री गरिएको खुलासा भएको छ। भरतगंजसिगौल–१ मा रहेको टासी छोइलिङ गुम्बाले जङगल क्षेत्रको सरकारी जग्गा फडानी गरी कब्जा जमाउँदै भोग गरिरहेको एक बिघा जमीन ७ (सात) लाखमा बिक्री गर्नेगरी बैना रकम लिएको थियो। यही असोज २५ गते दुई लाख रुपियाँ स्थानीय छोटे थापा भनिने गोर्कण थापासँग बैना लिएपछि सार्वजनिक जमिन बिक्री गरेको हल्ला गाउँघरमा फैलिएको थियो। सचेत स्थानीय बासिन्दा र वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वडा नं. ५/६ ले गुम्बाले बिक्री गरेको उक्त सार्वजनिक जग्गा कब्जामा लिने लिखित निर्णय गरेको छ। यसरी सचेत गाउँलेको सक्रियतामा वन समूहले जग्गा कब्जा गर्ने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक वनको जमिन खरिद–बिक्री गर्नेहरू आत्ति
फौजदारी न्यायमा जवाफदेहिताको सवाल- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव
फौजदारी न्याय मूलत: नौजना अपराधी छुटेपनि एकजना निरपराधीले सजाय पाउनुहुँदैन तथा शङकाको सुविधा अभियुक्तले पाउनुपर्छ भन्ने आधारभूत विश्वव्यापी सिद्धान्तमा आश्रित छ। यसको अर्थ हो आरोपको न्यायिक प्रक्रियाले सुनवाई गरी अपराध साबित भएपछि मात्र थुन्ने। सजाय गर्नुअघि आरोपी कहीं निर्दोष त छैन, न्यायिक मनले धेरेपटक सोच्नुपर्छ। सजाय गर्नुभन्दा निर्दोषलाई बचाउनु महत्त्वपूर्ण हो। शङकाको भरमा कसैलाई दोषी मान्न सकिंदैन। अभियोग शङकास्पद हुनुपर्छ र शङकारहित तवरले वस्तुगत सबुतबाट पुष्टि हुनुपर्छ। शङकास्पद कारणले अभियोग लगाइएको छ भने शङकाको कारणले नै आरोपीलाई छुटकारा मिल्छ । यी सिद्धान्तहरू फौजदारी न्यायका लागि बाध्यात्मक हुन् किनभने यसले राज्यका धेरै कुराको जर्गेना गर्छ। एक त राज्यलाई विधिको शासनमा हिंड्न बाध्य पार्छ भने प्रशासकको स्वेच्छाचारिता रोक्न, राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट बचाउँछ। बाघ र बाख्रालाई बिनाडर–भय एकै ठाउँमा रहन–बस्न अवसर दिन्छ र नागरिकको हरेक किसिमको अधिकारको रक्षा गर्छ । राज्य जहिले पनि फौजदारी अभियोगको कारण व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। शासकसँग राज्यको सम्पूर्ण शक्ति हुन्छ भ
–कुमार रुपाखेती आजकाल राष्ट्रियताको कुरा बेला–कुबेला उठ्ने गरेको छ। कुनै पनि सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि राष्ट्रियता उपेक्षाको विषय हुन सक्दैन। गणतान्त्रिक नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रघातको कुरा अब नौलो रहेन। आजकाल राष्ट्रियतासमेत मागी खाने भाँडो, सत्तामा उक्लिने भर्‍याङको रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। नेपाल उत्तरबाट चीन र पूर्व–दक्षिण–पश्चिमबाट भारतले घेरिएको मुलुक हो। भारतले पटक–पटक जानाजान वा अन्जानमा नेपाली अस्मिता, राष्ट्रियतासँग खेलवाड गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। आरोप त यो पनि छ कि भारतले नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई खेलौना खेलाएझैं खेलाउन चाहन्छ। जो यस भारतीय मनपसन्द खेलमा रम्छ–जम्छ, उसले सजिलै सत्ताको खुडकिलो उक्लन्छ, भारत विरोधीले यो वैतरणी पार गर्न सक्दैन भन्ने आरोप पनि भारतले खेप्नुपरेको छ। ‘मन नपर्नेको साँस पनि गन्हाउँछ’ भन्ने भारतीय पक्षधर यसलाई कपोलकल्पित कुरा बताउँछन् र भन्छन् भारत–नेपालसँग सुमधुर भाइचारा सम्बन्ध चाहन्छ, रोटी र बेटीको दुहाई पनि दिन्छन्। अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफूलाई सतर्क बनाउनु नेपालको दायित्व हो भन्ने मध्यमार्गीहरू पनि छन्। तर सबैले महसुस गरेको
हाकिहरूलाई सहय हुँदैन
आतिशबाजी सभ्यभन्दा सभ्य मुलुकमा पनि गरिन्छ र मानिसहरू ठूलो विजयोत्सवको रूपमा यसको आयोजना गर्छन्। विस्फोटक पदार्थ र आतिशबाजीको आविष्कारक चीनले जब सन् २००८ मा विश्व ओलम्मिकको आयोजना गर्‍यो, अद्वितीय आतिशबाजी गरेर विश्वलाई छक्क पारिदियो । चीनले आतिशबाजीको अद्भूत चमत्कार देखाएको मात्र हो, जुनसुकै पनि विश्व ओलम्पिकमा आतिशबाजीको अनौठो छटा देखाइन्छ। मानिस उत्तेजित हुन्छन्, उल्लसित हुन्छन्, विभोर हुन्छन् र जीवनलाई नयाँ अर्थ दिन्छन्। आतिशबाजी वर्षैभरि गरिंदैन। पटकाहरू सबै महिनामा पड्काइँदैन। तिहारदेखि छठसम्म मात्र आतिशबाजी र पटका पड्काउने चलन हो। त्यसबाहेक कसैले सित्तैमा दियो भने पनि कसैले न पटका पड्काउँछ न आतिशबाजी गर्छ । किनकि हरेक मौसम र चाडको आआफ्नो मान्यता रहेको हुन्छ। तिहारमा खाने सेल दशैंमा पकाइन्न, न होलीमा खाने मालपुवा तिहार वा दशैंमा खाइन्छ। जुन पर्वको जुन आग्रह हो त्यसभन्दा बाहेक कसैले न केही खान्छ र गर्छ नै। नेपालमा लामो समयदेखि सरकारले आतिशबाजी र पटका पड्काउन बन्देज लगाउँदै आएको छ। शान्तिकाल होस् वा माओवादीको जनयुद्धकाल अथवा भूमिगत समूहको चरम प्रकोप भएको बेला, गृह मन्त्राल
रक्सौलका पटका व्यापारीको पुर्पुरोमा हात वीरगंजका नागरिकका लागि नरमाइलो तिहार
प्रस, वीरगंज, ६ कात्तिक/ यस वर्ष वीरगंज शहरमा दिपावलीमा पटकालगायत आतिशबाजी कम हुने देखिएको छ। विस्फोटक पदार्थको प्रयोगकर्ताविरुद्ध कानुनी कारबाई गर्ने पर्सा प्रहरीले एक साताअघिदेखि प्रचार गरेको र प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलको कारबाईबाट तर्सेका आम नागरिकले सीमावर्ती रक्सौलबाट पटकालगायत आतिशबाजीका सामग्रीको खरिद एकदमै न्यून छ। रक्सौलबाट बर्सेनि एक करोडभन्दा बढीको पटकालगायत आतिशबाजीका सामान वीरगंज शहरमा मात्र भित्रिने गरेको बताउने एक व्यावसायीले यस वर्ष त्यस्तो खरिददारी नै नभएको र अब हुने सम्भावना पनि न्यून रहेको बताए । तिनै व्यवसायीले रक्सौलमा एक दर्जनभन्दा बढी पटकाका होलसेलर रहेका र अहिले तिनीहरू सबै नेपाली र खासगरी वीरगंजको ग्राहकको प्रतीक्षामा रहेको बताए। प्रहरीले कडाइ गरेको हल्ला रक्सौलमा समेत फैलिएपछि अहिले त्यँहाबाट कैरियरको काम गर्नेहरू पनि पटकालगायत आतिशबाजीको सामान ओसार्न छाडेका छन्। रक्सौलबाट कुनैपनि सामान कैरियरहरूले १० देखि २० प्रतिशतको ढुवानी खर्चमा ओसारपसार गर्दै आएकोमा अहिले पटकालगायत आतिशबाजीको सामानमा शतप्रतिशत ढुवानी खर्च दिंदा पनि कोही तयार छैन । वीरगंजसम्
चाडपर्वको समयमा चन्दा सहयोग माग्नेको ताँती
आरके पटेल, वीरगंज, ६ कात्तिक/ चाडपर्वको बेला पर्साका कर्मचारीहरू बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। दशैंलगत्तै आएको तिहार र छठका कारण चन्दा सहयोग माग्नेहरूको घुइँचोका कारण धेरै कर्मचारी अहिले कार्यालय आउन छाडेका छन् भने आएकाहरू पनि फाँटमा बस्दैनन् । भूमिगत सङगठनको फोन आतङकसँगै समाजसेवी, नेता, पत्रकार र क्लबहरूले चन्दा सहयोग मागेर हैरान पारेपछि अहिले कर्मचारीहरू कार्यालयमा बस्न छाडेका हुन्। प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्ला वन कार्यालय पर्सा, भूमिगत सिंचाइ, जिविस, मालपोत, भूमिसुधार, यातायात, नापी शाखा, वीउमनपालगायत कार्यालयहरूमा अहिले चन्दा आतङक सिर्जना भएको छ। जिल्ला वन कार्यालयले चन्दा दिंदादिंदा थाकेर चन्दा–सहयोग दिन असमर्थ रहेको सूचना टाँस्दा पनि मुक्ति नपाएको बताइन्छ । सो कार्यालयका एक कर्मचारीले चन्दा सहयोगका कारण कुनै काम नै गर्न नपाएको बताए। जिविस र वीउमनपाले चाडपर्वमा आर्थिक सहयोगको रकम पनि वितरण गर्दै आएको कारण त्यहाँ बढी भीड लाग्ने गरेको छ। त्यसैले जिविस र वीउमनपामा आजभोलि आर्थिक काम बिहान र बेलुकी कार्यालय बन्द रहेको बेला हुने गरेको स्रोतले बतायो । कार्यालय समयमा कामै गर्न पा
डे–नाइट क्रिकेटमा युनाइटेड विजयी
प्रस, वीरगंज, ६ कात्तिक/ प्रगतिशील युवा क्लब लक्ष्मणवाको आयोजनामा वीरगंज नारायणी क्रिकेट मैदानमा चलिरहेको वीरगंज कप डे–नाइट क्रिकेट प्रतियोगिताको आज सम्पन्न पहिलो खेलमा युनाइटेड क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ। आयोजक कमिटीका मुकेश पालले बताएअनुसार टस जितेर न्यु नेपाल टाइगर क्लबले ब्याटिङ रोजेको थियो। नेपाल टाइथर १३.२ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर ६३ रनमा सीमित भएको थियो। प्रत्युत्तरमा ६४ रनको झिनो विजयी लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रेको युनाइटेड क्रिकेटले १ विकेट मात्र गुमाएर १३ ओभरमा लक्ष्य पूरा गरी ९ विकेटले विजयी भयो। आजको पहिलो खेलको म्यान अफ द म्याच सौनूल आजम घोषित भएका थिए।
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न:– कुनै पनि फौजदारी अपराध गरेको कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दर्ता भएमा सो व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न कानुनी रीत पुर्‍याई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ त्यस्तो कानुन अनुसारको पक्राउ गर्न के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? कस्तो गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी गिरफ्तारी मानिन्छ ? –लालबाबु कुमार उत्तर :– कुनै पनि व्यक्तिउपर फौजदारी अपराधको आरोप लगाई कसैले जाहेरी दर्ता गरेमा वा कुनै अपराधको सन्दर्भमा शङका लागी पक्राउ गर्न आवश्यक भयो भने पक्राउ गर्नुपूर्व फलानो अपराधमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको छ भनी अपराधको नाम तथा कारणसहितको पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुपर्छ। पक्राउ पुर्जीमा मिति, अपराधको नाम, कारण समेत स्पष्ट खुल्नेगरी उल्लेख भएको र सम्बन्धित अधिकारीले सही छाप गरेको हुनुपर्छ। सम्बन्धित कार्यालयको लेटर प्याड चलानी नम्बर पनि उल्लेख भएको पक्राउ पुर्जी कानुनको रित पुगेको मान्न सकिन्छ। यसरी पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नेले २४ घण्टाभित्र उक्त अपराधका मुद्दा हेर्ने न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ। अनुसन्धानको निम्ति थप अवधि हिरासतमा राख्न
बालबालिकाहरूका लागि पर्यटन कति आवश्यक ?
अनन्तकुमार लाल दास बालबालिकाहरूमा पाइने कौतूहलता र जिज्ञासा दुई यस्ता प्रवृत्ति हुन् जसलाई रोकियो भने उनीहरू कुवाँको भ्यागुतो सरह बन्न पुग्छन्। यस्ता बालबालिकाको परिचय क्षेत्र सीमित र सङ्कुचित भएको हुनाले उनीहरूको मानसिक सोच पनि पङ्गु र अधूरो हुन्छ । यस्ता बालबालिकाहरू किताबी ज्ञानको दृष्टिकोणले बी.ए., एम.ए.को डिग्री हासिल गरे तापनि सामाजिक र व्यावहारिक जीवनमा पछाडि नै रहन्छन् र विषम परिस्थितिहरूको सामना गर्न सक्षम हुँदैनन्। यस्ता केटाकेटीहरू किताबी कीरा बनेर विद्यालयको परीक्षा राम्ररी उत्तीर्ण गर्न सफल भए तापनि जीवनको परीक्षामा अपवादबाहेक नराम्ररी फेल हुन्छन्। यसरी प्राप्त भएको असफलता र व्यावहारिक ज्ञानको कमीले जीवनमा उसलाई कहिल्यै अगाडि बढ्न दिंदैन। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा जीवनभरि हीनताबोधको शिकार भई भाग्य र अरूलाई दोष दिई राखेका कैयौं उदाहरण हाम्रै समाजमा विद्यमान छ। छिमेकबारे जान्ने इच्छा, त्यसलाई प्रत्यक्ष हेर्ने जिज्ञासा हरेक केटाकेटीको मनमा स्वस्फूर्त उत्पन्न हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने छिमेकको प्रत्यक्ष दर्शन गरेर ऊ जति खुशी हुन्छ त्यतिकै बौद्धिकरूपले प्रसन्न, सन्तुष्ट
खुशी मनाउने के कुरा ?
झन्डै देशभरिका अखबारहरूले निकै लामो समयदेखि नष्ट गर्न वा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको अमलेखगंजलगायत विराटनगर, पोखरा, नेपालगंज, हेटौंडा र काठमाडौंमा रहेको विषादि बल्ल व्यवस्थापन हुन थालेको छ । कृषि कार्यलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि ल्याइएको तर प्रयोग हुन नसकेर ३२ वर्षदेखि अमलेखगंजस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा थन्क्याइएको ५० टन विषादि जर्मन इन्टरनेशनल कर्पोरेशनको सहयोगमा जर्मनी पठाएर नष्ट गरिने भएको छ । ढिलै भएपनि अब अमलेखगंजको सो क्षेत्र विषादिको प्रभावबाट मुक्त हुने कुराले स्थानीय बासिन्दामा खुशी ल्याएको छ । किनकि उक्त विषादिको असरले स्थानीय बासिन्दालगायत विषादि भण्डारण गरिएको गोदाम नजिकै रहेको विद्यालयका विद्यार्थीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । गर्मी चर्केपछि विषादिको गन्ध चारैतिर फिंजिएर विद्यार्थीहरू बेहोश हुने, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्नेलगायत रोगबाट पीडित हुने गरेका थिए । त्यही अवस्था गोदाम नजिक बसोबास गर्ने मानिसहरूको पनि हुने गरेको थियो । विषादि हटाउन थालियो, अधिराज्यभरि रहेको यस्तो ७५ टन काम नलाग्ने विषादिमध्ये ५० टन अमले
कमजोरी देखिए सजाय भोग्न तयार मिसिल अध्ययन नगरी आक्षेप नलगाउन आग्रह
विपी यादव, वीरगंज, ५ कात्तिक/ फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा जवाफदेहिताको सवाल विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। सरकारीवादी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा हुने कमजोरीको जवाहदेही को हुने, कसरी हुने ? कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी, पर्सा बारका पदाधिकारी, अधिवक्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मी तथा पार्टी प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। काशी तिवारी हत्याको आरोप लागेको केही व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयको जवाफदेहिता निर्णयकर्ताले लिनुपर्छ, उनको नियतमा खोट छ भनी अधिकांश वक्ताले बताएका थिए। मन्त्रीउपर मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको र त्यसैको खबरदारी गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बताएका थिए । मानव अधिकारको रक्षा र विधिको शासनको परिपालना नेपाल बारको मुटु हो त्यसैको निरन्तरताको निम्ति पनि यो कार्यक्रमको आयोजना
अमलेखगंजमा भण्डारण गरिएको विषादि हटाउन थालियो करिब ५० टन विषादि नष्ट गरिने
प्रस, पथलैया, ५ कात्तिक/ बारा, अमलेखगंजस्थित बस्तीबीच भण्डारण गरिएको हानिकारक विषादि शनिवारदेखि हटाउन सुरु गरिएको छ। जर्मन इन्टरनेशनल कर्पोरेशन (जिआइजेड) र जर्मन सरकारको संयुक्त प्रयासमा हानिकारक विषादि हटाउन सुरु गरिएको हो। वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा अमलेखगंजस्थित कृषि सामग्री संस्थानको गोदाममा भण्डारण गरिएको करिब ५० टन विषादि हटाउने कार्य सुरु भएको उक्त संस्थाका प्रोजेक्ट मेनेजर वल्फे स्किम्प्ट जानकारी दिएका छन्। उक्त संस्थाले तीन दिनभित्र अमलेखगंजको विषादि तीन साताभित्र विराटनगर, पोखरा, नेपालगंज, हेटौंडा र काठमाडौंमा रहेको विषादि सङकलन गरिसक्ने बताएको छ। देशभरमा करिब ७५ टन विषादि भण्डारण गरिएको छ । कृषि सामग्री संस्थानले करिब ३२ वर्षअघि कृषि प्रायोजनका लागि जर्मन लगायत विभिन्न देशबाट भित्र्याएको उक्त कीटनाशक औषधी प्रयोगमा नआएपछि अमलेखगंज गोदाममा भण्डारण गरिएको थियो। बस्तीबीच भण्डारण गरिएको औषधी दिन–प्रतिदिन विषादिमा परिणत हुँदै गएकोले अमलेखगंजवासीको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको थियो। उक्त गोदामबाट निस्कने दुर्गन्धका कारण आँखा पोल्ने, टाउको दुख्नेलगायत सम
युनिटी क्रिकेटद्वारा सर्राफ क्रिकेट पराजित
प्रस, वीरगंज, ५ कात्तिक/ प्रगतिशील युवा क्लब लक्ष्मणवाद्वारा नारायणी रङगशालामा जारी डे–नाइट टी–२० नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेल युनिटी स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। युनिटी स्पोर्ट्स र सर्राफ क्रिकेट क्लबबीच भएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको युनिटीले १८ ओभरमा १० विकेटको नोक्सानिमा १२३ रन बनायो । प्रत्युत्तरमा फिल्डमा उत्रेको सर्राफ क्रिकेट क्लबले १८ ओभरमा १० विकेट गुमाएर ८९ रन मात्र बनाउन सक्यो। उक्त खेलको म्यान अफ दि म्याच युनिटीका सुरज पटेल घोषित भएका आयोजक क्लबका सदस्य मुकेश पालले जानकारी गराएका छन्।
दर्ताबिनै इँटाभट्टा सञ्चालन, सम्बन्धित निकाय मौन
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ५ कात्तिक/ बाराको उत्तरीभेग भरतगंज सिगौलमा अवैध इँटाभट्टा सञ्चालन हुँदै आएपनि कानुनले छुन सकेको छैन। भरतगंजको वडा नं. २ स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय उच्च माविको सार्वजनिक चउरबाटै इँटाभट्टामा सहजै जान सकिने गरी बाटो दिइएको छ। विद्यालय नजिकै इँटाभट्टा सञ्चालन भएपछि विद्यार्थीहरूको ध्यान इँटाभट्टामा केन्द्रित हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, घरेलु कार्यालयसँग अवैध साँठगाँठ गरी बिनादर्ता दुईवटा इँटाभट्टा विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा छन्। पहिलेको वर्ष स्थानीय विद्यालय निर्माणका लागि इँटा तयार बनाउन लागेको भनिएपनि निजगढ, हेटौडा, चितवनलगायत जिल्लाहरूमा अवैधरूपमा उत्पादन गरिएको इँटा बिक्री हुँदै आएको छ। घरेलु कार्यालय बारामा केही वर्षअघि निजगढमा सञ्चालन गर्नेगरी इजाजत लिएको एक इँटा उद्योगको च्ग् लेखिएको फर्माबाट भरतगंजसिगौलमा धमाधम इँटा तयार भइरहेको छ। वन कार्यालयले वन क्षेत्रबाट ५ किलोमिटरभित्र इँटा, क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने हो तर जिल्ला वन कार्यालय बारा बेखबर रहनु रहस्यको विषय बनेको छ।